दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! कर्तुत थाहापाउदा सबैको होस उड्यो – ramechhapkhabar.com
बा. २ ख ६१०६ नम्बरको बस दिनभर काठमाडौंको चक्रपथमा रुटमा चल्ने गर्थ्यो । दिनभर चक्रपथमा यात्रुलाई सेवा दिने यो बस जब साँझ पर्न थाल्थ्यो त्यसपछि एकाएक नागढुंगा हुँदै पृथ्वीराजमार्ग तर्फ लाग्थ्यो । रातभर पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थान पुगेपछि बिहान झिसमिसेमै बस पुनः काठमाडौं प्रवेश गर्थ्यो । यो क्रम निकै लामो समय चलिरह्यो । दिनभरी चक्रपथमा यात्रुलाई सेवा दिने र रातपरेपछि पृथ्वीराजमार्गमा पुग्ने रहस्यमयी बस यतिबेला भने प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ । बस मात्रै नभएर बसका धनी रविन घलेसहित तीन व्यक्ति पनि यतिबेला प्रहरी हिरासतमै छन् ।
आखिर यो बस, बस धनी र अन्य व्यक्ति किन प्रहरी हिरासतमा पुगे त ? प्रसंग रोचक नै छ । रात परेपछि पृथ्वीराजमार्गमा जाने बस र यसका धनीसहितका व्यक्तिको बिस्तारै पोल खुल्न थाल्यो र उनीहरुले गर्ने करतुत विषयमा जनगुनासो प्रहरीमा आउन थाल्यो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धादिङ गजुरीले गहन अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । प्रहरी निरीक्षक भोजराज पाण्डेको कमाण्डमा प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पार्‍यो। त्यसपछि रहस्यमयी बस र यसका धनी रातारात पृथ्वीराजमार्गमा पुग्ने गरेको रहस्य खुल्यो ।
दिनभर चक्रपथ चल्ने यो बस रातपरेपछि पृथ्वीरामार्गमा चो रीका लागि पुग्दोरहेछ । चो री गर्ने सामाग्री पनि गाडीकै पाटपुर्जा, डिजेल र पेट्रोल रहेछन् । रातपरेपछि पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थानमा पुग्ने र रोकी राखेका, बिग्रेका सवारी साधनबाट डिजेल, टायर, ब्याट्री र यात्रुका समान चो री गर्न एक गिरोहले यो बसको प्रयोग गर्दोरहेछ । राजमार्ग छेउछाउमा यस्तोखाले चो रीका घटना बढ्न थालेपछि एक कान दुई कान हुदै प्रहरीसम्म यो घटना पुग्यो । पछिल्लो समय फरक प्रकृतिको चो रीका घटना हुन थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धादिङ, गजुरी थप चनाखो भयो । त्यसपछि शं कास्पद स्थलमा प्रहरीले निगरानी बढाउन थाल्यो ।
प्रहरी अनुसन्धानकै सिलसिलामा गएको कार्तिक ३ गते पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पर्ने गजुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित घाटबेशीमा रातको समयमा रोकी राखेको एक सवारी साधनमा सवारी साधनमै आएका तीन व्यक्तिले चो री गर्दै गरेको सीसीटीभी मा दृश्य कैद भएको देखियो । तर उक्त दृश्यमा चो री गरेको स्पष्ट भएपनि चो री गर्ने व्यक्ति र गाडीको नम्बर पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरी निरीक्षक भोजराज पाण्डेको कमाण्डमा प्रहरीले थप निगरानी अघि बढायो ।
प्रहरी अनुसन्धानकै क्रम्मा गत मंसिर ९ गते घाटबेशीमै शं कास्पद गतिविधि भैरहेको स्थानीयले देखेपछि प्रहरीमा खबर पुग्यो । त्यसपछि प्रहरी घटनास्थलतर्फ लाग्यो तर प्रहरी पुग्नुअघि नै चो री गर्ने व्यक्तिहरु बस लिएर फरार भए ।
पक्राउ हुन बाट जोगिन भाग्दै गरेको अवस्थामा थाक्रे गाउँपालिका २ सिम्ले भन्ने स्थानबाट बा २ ख ६१०६ नम्बरको बस र गाइघाट–९ उदयपुरका सद्धाम राइन पक्राउ परे । त्यसपछि खुल्यो पृथ्वीराजमार्गमा रातीराती पुग्ने बस र गिरोहको धन्दाको रहस्य । बस चालक राइनकै बयानका आधारमा प्रहरीले थप दुई जना पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ पर्नेमा धादिङकै सिद्धलेक गाउँपालिका ६ का रविन घले र कमल घले रहेका छन् । पक्राउ पर्ने रविन घले भने बसधनी नै रहेको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिए ।
पक्राउ पर्नेहरुलाई चो री तथा डा का मु द्धामा पुरपक्षका लागि थुनामा राखिएको निरीक्षक पाण्डेको भनाइ छ । उनीहरुले चो री गरेको सामान चो री गर्न प्रयोग गर्ने गरेको बसमा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले बतायो । उनीहरुले चो री गरेर धन कमाउने भन्दा पनि तत्कालको गर्जो टार्न चो री गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेको भनाइ छ । घटना र विचारमा विकास रौनियारले लेखेका छन् ।